Kedu ihe na-egbochi ndị na-ahazi na itinye usoro atụmatụ azụmaahịa? | Martech Zone
Kedu ihe na-egbochi ndị na-ahazi na itinye usoro atụmatụ azụmaahịa?
Wednesday, December 30, 2015 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ka anyị na-abanye na 2016, òtù dị iche iche ka na-alụ ọgụ na nke ha na-elekọta mmadụ na-ere azum. Anyị ekekọrịtawo ntọala nke ire ere n'oge gara aga na ịgọnahụ abamuru nke otu ndị na-anabata omume ire ere:
61% nke ndị otu na-arụ ọrụ na-elekọta mmadụ na-akọ akụkọ dị mma na uto ego, nke karịrị 20% karịa ndị na-abụghị ndị na-ere ahịa!
Na ndị dị iche iche nke stats, ị ga-eche ọ bụla nzukọ ga-n'ịkpa na-elekọta mmadụ na-ere dị ka a isi atụmatụ… ma ọ bụghị na mfe.
72% nke ndị ọkachamara na-ere ahịa na-eche na ha amachaghị na ire ere mmadụ
Achọpụtala nnukwu ihe ịma aka na nnabata nnabata mmekọrịta mmadụ na ibe na nyocha data sitere na Ahịa maka Ndụ. Enweghị ọzụzụ zuru ezu, enweghị mmụba nke ROI, na mmachi na ntinye n'ime usoro ahịa emeela ka azụmaahịa na-agbasi mbọ ike itinye mmemme. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu enweghị usoro ọzụzụ na-arụsi ọrụ ike na ebe ọ fọrọ nke nta ka ụzọ atọ n'ụzọ anọ nke ndị ọkachamara na-ere ahịa amachaghị nke ọma na itinye usoro a n'ọrụ.
Tupu afọ a, anyị na-akọrọ a Mmalite nke Nduzi Azụ Azụ ozi sitere na Salesforce. N'ezie, atụmatụ gị kwesịrị ilekwasị anya nke ọma iji kọwaa ndị na-ege gị ntị, wulite ikike gị, ma gaa n'ihu ndị ndu tozuru etozu.
Tags: 2016usoro nzaghachimmmmmmmmmmmmmahịa maka ndụsandler ọzụzụna-elekọta mmadụ na-erena-elekọta mmadụ na-ere infographicenweghị afọ ojuju
Starbucks, Co nwere ike ịme mmekọrịta ọha na eze
Kedu ihe kpatara 2016 ga - eji bụrụ akara aka zuru ụwa ọnụ maka akụnụba ekwentị